सिंगटी हाइड्रोको सेयर बाँडफाँट आज, सेयर पाउने भाग्यमानी कति ? – Khula kura
सिंगटी हाइड्रोको सेयर बाँडफाँट आज, सेयर पाउने भाग्यमानी कति ?
काठमाडौं : सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको आइपीओ बाँडफाँट आज शुक्रबार ९चैत २७ गते ११ बजे बाँडफाँट गरिंदैछ । बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटलको आफ्नै कार्यालयमा आइपीओ बाँडफाँट हुनेछ । सिंगटीले चैत ६ गतेबाट १० गतेसम्म १०० रुपैयाँ दरमा कुल २९ लाख कित्ता आइपीओ निष्कासन गरेको थियो । यसमध्ये ५८ हजार कित्ता कर्मचारी र १ लाख ४५ हजार कित्ता म्युचुअल फन्डहरुलाई छुट्याएर बाँकी २६ लाख ४० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरिएको हो ।
यता, सिंगटी हाइड्रोको आइपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेकाले सेयर पाउन भने भाग्यमै भर पर्नुपर्नेछ । गोलाप्रथाबाट सेयर बाँडफाँट हुनेछ । यसमा कुल २ अर्ब ४६ करोड ६५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । १६ लाख ३५ हजार ५३७ जनाले २ करोड ४६ लाख ६५ हजार ६४० कित्ताका लागि आवेदन दिएका हुन् ।
यो मागको तुलनामा ९.३४ गुणा बढी हो । यसआधारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको २६ लाख ९४ हजार कित्तालाई आधार मान्दा २ लाख ६४ हजार जना आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर हात पार्नेछन् । १३ लाख ७१ हजार ५३७ जना भन्दा धेरै आइपीओ पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् ।
यो आइपीओलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले ‘केयर एनपी डबल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ प्रदान गरेको थियो । उक्त रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमता मध्यम रहेको संकेत गर्दछ ।
यस्ता ५ खानेकुराले बनाउँछ हड्डी मजबुत
शैक्षिक संस्था कम्तिमा तीन साता ब’न्द गर्न प्रस्ताव गर्ने सीसीएमसीको यस्तो निर्णय…